“ ဦးသန်းရွှေရဲ့ သမက် ဒေါက်တာနေစိုးလှိုင်မှ ပြည်သူဘက်ကနေ ရေးသားလာတဲ့ ကျေးဇူးရှင်ကို ကျေးစွပ်ခြင်းဆိုတဲ့ စာတစ်စောင် ” – Real News
“ ဦးသန်းရွှေရဲ့ သမက် ဒေါက်တာနေစိုးလှိုင်မှ ပြည်သူဘက်ကနေ ရေးသားလာတဲ့ ကျေးဇူးရှင်ကို ကျေးစွပ်ခြင်းဆိုတဲ့ စာတစ်စောင် ”
“ ဦးသန်းရွှေရဲ့ သမက် ဒေါက်တာနေစိုးလှိုင်မှ ပြည်သူဘက်ကနေ ရေးသားလာတဲ့ ကျေးဇူးရှင်ကို ကျေးစွပ်ခြင်းဆိုတဲ့ စာတစ်စောင် ”
အိမ်ကမွေးထားတဲ့ ခွေးကလေးတွေကို မုန့်ကျွေးနေတုံး ရပ်ထားတဲ့ ကားထဲက သီချင်းသံလေးတွေ ပျံ့လွင့်လာတယ်…
လွှမ်းမိုးရဲ့ သီချင်းလေးထင်ပါရဲ့…ငါကျွေူးမွေးထားတဲ့ အိမ်ကခွေးကလေး အရွယ်ရောက်တော့ ခြံလုံအောင် ကင်းစောင့်တတ်ပြီ၊ညညဆို သူတို့လေးတွေ ခြံလုံအောင် ကင်းစောင့်တတ်သည်
သိတ်ချစ်ရတဲ့ ပင်စီရယ် စိတ်ညစ်ရတဲ့ ပင်စီရယ်ကွယ် သူတို့လေးတွေလောက် မင်းသိတတ်ရင် ကောင်းမယ်..
ဩော်… ဟုတ်ပါရဲ့… သေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ကိုယ်ကကျွေးမွေးထားတဲ့ ခွေးကလေးတွေကတောင် ကိုယ့်လုံခြုံရေးကို စောင့်ရှောက်ပေးရှာတယ်…
အခုတော့ လက်နက်အားကိုး စစ်တပ်နဲ့ရဲ တွေကပြည်သူတွေကပေးထားတဲ့ အခွန်အခတွေနဲ့ လစာစားပြီးပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်ကိုကာကွယ်ရမဲ့အစား ပြည်သူတွေဆီကရတဲ့ အခွန်ဘဏ္ဏာငွေတွေနဲ့ ဝယ်ထားတဲ့ လက်နက်တွေနဲ့ ပြည်သူတွေကို ……. တာတော့ ကျေးဇူးရှင်ကို ကျေးစွပ်တာဘဲ…
“ ဦးသနျးရှရေဲ့ သမကျ ဒေါကျတာနစေိုးလှိုငျမှ ပွညျသူဘကျကနေ ရေးသားလာတဲ့ ကြေးဇူးရှငျကို ကြေးစှပျခွငျးဆိုတဲ့ စာတဈစောငျ ”
အိမျကမှေးထားတဲ့ ခှေးကလေးတှကေို မုနျ့ကြှေးနတေုံး ရပျထားတဲ့ ကားထဲက သီခငျြးသံလေးတှေ ပြံ့လှငျ့လာတယျ…လှမျးမိုးရဲ့ သီခငျြးလေးထငျပါရဲ့…ငါကြှေူးမှေးထားတဲ့ အိမျကခှေးကလေး အရှယျရောကျတော့ ခွံလုံအောငျ ကငျးစောငျ့တတျပွီ၊ညညဆို သူတို့လေးတှေ ခွံလုံအောငျ ကငျးစောငျ့တတျသညျ
သိတျခဈြရတဲ့ ပငျစီရယျ စိတျညဈရတဲ့ ပငျစီရယျကှယျ သူတို့လေးတှလေောကျ မငျးသိတတျရငျ ကောငျးမယျ..ဩျော… ဟုတျပါရဲ့… သခြောစဉျးစားကွညျ့လိုကျတော့ကိုယျကကြှေးမှေးထားတဲ့ ခှေးကလေးတှကေတောငျ ကိုယျ့လုံခွုံရေးကို စောငျ့ရှောကျပေးရှာတယျ…
အခုတော့ လကျနကျအားကိုး စဈတပျနဲ့ရဲ တှကေ
ပွညျသူတှကေပေးထားတဲ့ အခှနျအခတှနေဲ့ လစာစားပွီးပွညျသူတှရေဲ့ အသကျအိုးအိမျကိုကာကှယျရမဲ့အစား ပွညျသူတှဆေီကရတဲ့ အခှနျဘဏ်ဏာငှတှေနေဲ့ ဝယျထားတဲ့ လကျနကျတှနေဲ့ ပွညျသူတှကေို ……. တာတော့ ကြေးဇူးရှငျကို ကြေးစှပျတာဘဲ…